I-CMO-on-the-Go: Bangasebenza Kanjani Abasebenza NgeGig Umnyango Wakho Wokumaketha | Martech Zone
Isikhathi esiphakathi se-CMO singaphezu nje kweminyaka engu-4- emfushane kakhulu ku-C-suite. Kungani? Ngengcindezi yokufinyelela imigomo yemali engenayo, ukutubeka sekuya ngokungenakugwemeka. Yilapho kusebenza khona igig. Ukuba yi-CMO-on-the-Go kuvumela Abakhangisi Abakhulu ukuthi bazibekele amasheduli abo futhi bathathe kuphela lokho abakwaziyo ukuthi bangakwazi ukubhekana nakho, okuholele ekusebenzeni kwekhwalithi ephezulu kanye nemiphumela engcono yomugqa waphansi.
Kodwa-ke, izinkampani ziyaqhubeka nokwenza izinqumo ezibucayi ngamasu ngaphandle kosizo lombono we-CMO, ngaphandle kobuchwepheshe ekukhuleni kwemali engenayo yenkampani eziyiletha etafuleni. Yilapho abasebenzi be-gig abasezingeni eliphezulu bezongena khona ukuzodlala. Bangasebenza njenge-CMO yemikhiqizo ngezikhathi ezithile, kulondolozwa umkhiqizo izindleko zokuqasha i-CMO okungenzeka ibe khona iminyaka embalwa nje.
Igigri ye-CMO yamaqhezu ihlukile ekubeni ngumxhumanisi; kubandakanya ukusebenzisana ne-C-suite namabhodi njengengxenye yeqembu, ngokuhlanganiswa okujulile ekusebenzeni kwansuku zonke. Njenge-CMO ebamba iqhaza emnothweni we-gig, nginezibopho ezibonisa lezo ze-CMO yesikhathi esigcwele. Ngihola amaqembu okukhangisa ukufeza izinhloso zamasu nokubika ku-CEO. Ngikwenza lokhu ngezikhathi ezithile. Njengabasebenzi abaningi bezomnotho be-gig, ngithole imisebenzi ngenethiwekhi yoxhumana nabo engibathuthukisile ngenkathi ngisendleleni yomsebenzi wendabuko, kubandakanya nokuba yi-CMO yamaqhezu ka-Abuelo's, The Cookie Department nabanye.
Kungani Abasebenzi be-Gig?
Omunye wemibuzo ebuzwa njalo engibuzwayo ngukuthi: Yini abasebenzi be-gig abaletha eminyangweni yezokumaketha? Enye inzuzo enkulu ukuthi umsebenzi wegig uletha imininingwane emisha lapho ejoyina iqembu labasebenzi besikhathi eside. Leli lungiselelo liletha okuhle kunakho konke imihlaba - "amehlo amasha" kusuka kulwazi olusha kanye nolwezikhungo oluvela eqenjini lesikhathi esigcwele.
Ngokuvumelana ne PayScale, umholo ophakathi we-CMO ngu- $ 168,700. Izinkampani eziningi, ukuqala ikakhulukazi, azikwazi ukuqasha umuntu kuleloholo ngokugcwele, kepha i-gig CMO ingaletha iminyaka efanayo yesipiliyoni nobuholi ngezindleko eziphansi kakhulu. Uma ithimba lokumaketha elihlala njalo limelana nesilingo sokuphatha i-gig CMO njengomuntu wangaphandle futhi lifaka itoho kuzo zonke izinqumo ezifanele, inkampani izothola inzuzo ephelele yochwepheshe onamava futhi ofezekile ngaphandle kwenani lentengo eliphakeme.
Enye inzuzo ukuthi ukuhlelwa kwegig kungavumela izinkampani nabaphathi ukuthi bahlole ukushayela ubudlelwano obuhlala njalo. Ngenkathi abasebenzi abaningi be-gig (njengami) beneliseke ngokuphelele ukusebenza ngesivumelwano futhi bekwazisa ukuguquguquka nokuhlukahluka, abanye bangakujabulela ukufika ebhodini isikhathi esigcwele besikhundla esifanele. Ukuhlelwa kwe-gig kuvumela izinhlangothi zombili ukuthi zikuhlole lokho ngaphambi kokwenza ukuzibophezela.
Amathiphu ama-CMOs afuna ukwenza ushintsho
Uma uyi-CMO futhi uqala ukuzizwa ushile, kungahle kube yisikhathi sokuhlola ukuthi ungabuletha kanjani ubuchwepheshe bakho bokumaketha ezinkampanini ngokwesivumelwano. Finyelela kulabo osebenza nabo ubazise ukuthi unentshisekelo emsebenzini we-gig. Ungakhohlwa ukufaka abathengisi ekufinyeleleni kwakho - imvamisa banombono wangaphakathi wezinhlangano eziningi futhi banganikeza umkhondo lapho abaphathi bephuma kuholela esihlalweni esivulekile.
Esinye sezithiyo eziphezulu ezicashunwe emsebenzini wokuzimela imali engenakulindeleka. Ngaphambi kokungena, qiniseka ukuthi ukulungele ukwehla kwemali nokugeleza okwenzeka nakanjani emsebenzini wokuzimela. Qiniseka ukuthi uzilungiselele ngokwezezimali nangokomzwelo ukuze uqhubekele phambili ngezikhathi ezinzima. Lapho uchwepheshe wokumaketha engena kwezomnotho wegigi ngamehlo avuleke kakhulu, kungaba yimpilo eyanelisa ngokumangazayo nenomvuzo.
Lapho izinhlangano zamukela izinzuzo zokuqasha abaphathi bezentengiso ezizimele, ubudlelwano bungasizakala bobabili. AmaGig CMO anganikeza imininingwane emisha, ubuchwepheshe obungabizi nemithelela emihle emgqeni waphansi. Ngakolunye uhlangothi, isisebenzi segig sinokuguquguquka, sinomvuzo womsebenzi futhi sidiniwe kancane.
Tags: umphathi omkhulu wezokumakethaKanjaniI-cmo yokuqashacmo usohambeniumnotho we-gigabasebenzi be-gig
Ukudlula kumaBlockers: Ungazibona Kanjani Izikhangiso Zakho, Uchofoze, futhi Wenze Ngazo